Simplr • agbụ kacha mma maka obere ese foto • Emebere na USA
Igwefoto Igwefoto maka Igwe Igwe na - enweghị ihu igwe
Ihe kacha mma maka obere ese foto
Ahụmahụ radikal ọhụrụ ụkpụrụ nke ọsọ, sụlelị na njupụta - ya na eriri ejiri ya mee maka enyo na-enweghị enyo, ngwanrọ ngwanrọ, M4 / 3, kọmpat DSLR, na igwefoto ihe nkiri 35mm. Mere na USA.
Ejiri eriri Simplr iche maka obere, igwe foto ndị ọkachamara.
A na-ahọrọ F1 kachasị mma site na omume, agbamakwụkwọ, na ndị na-ese foto n'okporo ámá na-ahọrọ ịrụ ọrụ nke ọma. N'ịchọpụta nguzozi dị mma nke nkasi obi na ịdị mma na-adọrọ adọrọ na ọtụtụ enyo, M4 / 3 ma ọ bụ igwefoto na-agagharị agagharị (ma ọ bụ dịka "obere" eriri na igwefoto buru ibu), ọ na-atụgharị na eriri aka nkwekọrịta ruru ihe dị ka sekọnd 15.
Maka ụlọ ike ugbu a, ọ nweghị eriri dị ka F1ultralight. Yiri na anyị F1, na ọbụna Ọzọ nku-aba-uba otosịrị iru, ọ na-ịkwa akwa-mere naanị maka ọhụrụ ọgbọ nke obere ese foto (dị ka Fuji X100 na Sony RX1R usoro).
Ebughibu Proor, Light Weight & Incredible Packability
Ndozi, Udo Dị Mfe Otu-Slider
Ike, Durability & Meticulous Mere na USA Craftsmanship
Ọdịdị a na-enyo enyo enyo nwere obere akara
Ụbọchị 30 ga-alaghachi & Akwụkwọ ikike ndụ
Ọhụrụ Press & Simplr Sightings from our blog
Wired: Akpa igwefoto kacha mma, eriri, ntinye, na akpa azụ
Onye nyocha Scott Gilbertson kpọrọ Simplr dị ka eriri igwefoto kachasị amasị ya na Wired's Best Camera Bag, Straps, Inserts, and Backpacks (2021). “… Akwa eriri, na nke kacha mma m ji. O nwere ihe niile m choro ma o nweghi ihe m n’eme. Ọ naghị eti mkpu 'Abụ m onye na-ese foto,' na ọ nweghị ọtụtụ mgbịrịgba na mkpọrọhịhị, mana ọ dị oke mma […]
Jay Fei: Ihe dị na akpa igwefoto m
Jay Fei bụ onye na-ese foto n'okporo ámá, na-ekerịta njem foto ya (site na onye kwuru na ya nwere mmasị na onye na-amu amu) na YouTube channel, JayRegular. Ọ na-ekwupụta echiche ziri ezi na nke ziri ezi na akụrụngwa, ọkachasị Fuji X100V ya, ma nwee ikike ịkọwa ihe n'ụzọ doro anya - ya mere lelee ya. Na vidio a, ọ mere […]
Fujinon XF35mmF1.4 R Video Video na Charlene Winfred
Ọ bụrụ na ị jụọ anyị onye na-ese foto anyị na-akpachi anya na Fuji si anwansi XF35mmF1.4 R, ọ ga-abụ Charlene Winfred. Yabụ na ọ dabara adaba na Fujifilm n'onwe ha họọrọ igosipụta ya na vidiyo ọhụụ ha maka oghere a (ọ bụghị nke ọhụụ). N'ime ụwa ebe ọhụụ na-emetụta mgbe niile na […]
Gụkwuo na Blog anyịChọta ezigbo eriri gị
Iji mee ka ihe dị ọhụrụ, anyị na-achọ ịmegharị agba anyị site n'oge ruo n'oge. Ee, anyị nwere ike ịnwe eriri ịchọrọ na oji… ma eleghị anya, otu ma ọ bụ abụọ ndị ọzọ - mana mgbe anyị rere - anyị na-agakarị emela nwere atụmatụ ọ bụla ị ga-emekwu n'ọdịnihu. Yabụ ọ bụrụ n'ịhụ agba masịrị gị - jidere ya mgbe anyị nwetara ya!